How To Install Google Apps (MIUI 8, 9, 10) – Xiaomi Guide
ကျနော့် blog ထဲမှာ Google app တွေကို China MIUI rom မှာ သွင်းနိုင်တဲ့နည်းတွေရေးပေးထားတာ တော်တော်များများကိုရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဖုန်း model၊ Android version တို့အပေါ်ပါမူတည်ပြီး ပေးထားတာတွေဖြစ်လို့ လိုက်ရှာရတာ၊ မှတ်ရတာ မူးပါလိမ့်မယ် 😀 😀
သည်နည်းက ဟိုးယခင် MIUI Version နိမ့်စဉ်အခါကတည်းက Mi phone တွေမှာ Google app သွင်းချင်ရင် သုံးလာခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ အရင်တုန်းကတော့ သူက auto download လုပ်ထည့်ပေးတာတွေက version နိမ့်တာတွေ တစ်ခါတလေပါလာတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အခု MIUI 8,9 တွေခေတ်မှာ ထည့်သွင်းရတာ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ကျနော် သူများဖုန်းတွေကို ထည့်ပေးတာ Android version ဘယ်လောက်တွေပဲဖြစ်နေနေ အဆင်ပြေပြေထည့်လို့ရတယ်။ ချက်ချင်းသုံးလို့ရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေပဲ ကြုံရပါတယ်။ အရင်လို Permissions ကိစ္စတွေတောင် သိပ်စဉ်းစားပေးစရာ မလိုလှတော့ပါ။
Google Play Store ကို အဆင်ပြေအောင်ထည့်သုံးရတာကလည်း software တွေကို Play Store ကနေ တိုက်ရိုက်ထည့်သုံးချင်းသာ ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် အကိုက်ဆုံး App ကို ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook လိုမျိုးဆိုရင်တောင် Android version, Screen DPI, CPU Arch စတဲ့အရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးရှိပါတယ်။ အဲသည်တော့ တစ်ခုခုနဲ့မကိုက်ညီတာ ထည့်ခဲ့မိရင် သုံးလို့တော့ရတယ်.. ပြီးမှ ထွက်ထွက်သွားတယ်တို့.. ဘယ်ထဲဝင်ရင် ဖုန်းဟန်းသွားတယ်တို့.. စတာတွေ ဖြစ်လာပါလေရော… Online game တွေကလည်း Google account နဲ့အဓိကချိတ်ဆက်ကြတော့ သည် Google နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ကိုယ့်မှာထည့်ထားဖို့ဆိုတာက လိုအပ်လာတာပေါ့။
သွင်းပုံသွင်းနည်း အကျဉ်းချုပ်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါမယ်။ ကျန်အသေးစိတ်ကတော့ ဆက်ဖတ်ပြီး အဆင့်တိုင်းမှာ လုပ်စရာလေးတွေ ကျန်ရှိသွားတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် လုပ်သွားပါ။ အဲဒါမှ မိမိလုပ်ချင်တာ အဆင်ပြေမှာပါ။
Google Installer apk ကို Mi App Store ထဲနေရှာဒေါင်းထည့်ပါတယ်။
Google Installer ကို run ခိုင်းပြီး လိုတာတွေက အလိုလိုရှာထည့်ခိုင်းပါတယ်။ မိမိက လိုအပ်တဲ့ OK, Done လောက်ကိုပဲ နှိပ်ပေးပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Permissions လေးတွေကို လိုက်ပေးတာလုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ပါပြီ။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ app တွေ Install လို့ရအောင် Unknown Sources ကို ON ထားပေးရပါမယ်။ ဒါက ဖုန်းကို အခုမှအသစ်ဝယ်လာ၊ ဆိုင်ကသည်တိုင်း ယူလာခဲ့တာမျိုးတွေမှာ လိုအပ်လို့လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့။ သုံးနေကြအတွက်ကတော့ သည်နေရာ လုပ်ပြီးဖြစ်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်က အင်တာနက်ကနေဘာပဲလုပ်လုပ် Mobile Data နဲ့ပဲလုပ်တာများမှာဖြစ်လို့ Mobile Data နဲ့ file တွေ Download လုပ်ရင် Size limit ကြောင့် Pause ဖြစ်မနေရအောင် Downloads app settings ထဲမှာပြင်ရပါမယ်။ ဖုန်းကို အမြဲလို သုံးနေသူတွေအဖို့ ဒါကလည်း လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ သည်ဟာလုပ်တာက အင်တာနက်ကနေ မိမိတို့လိုချင်တာတွေ download လုပ်တာ မရဘူး.. Waiting for WLAN ဆိုတာမျိုးပဲ ပေါ်နေတယ်.. စတာတွေ မဖြစ်အောင်လဲ လုပ်ထားပေးတဲ့အရာပါ။
အခုမှ Google app စထည့်မယ့်သူတွေကတော့ သည်အချက် စဉ်းစားစရာ မလိုလှပါဘူး။ အရင်တုန်းက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထည့်ခဲ့ပြီး အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေသူတွေ အခုမှ အစကနေ အသစ်ပြန်လုပ်ချင်သူတွေကတော့ အရင်ဖုန်းထဲမှာ ရှိထားပြီးသား အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Google apps (ခြောက်ခုရှိပါမယ်) တွေကို အကုန် Uninstall လုပ်ပစ်ထားရပါမယ်။ အောက်ပါပုံအတိုင်းလုပ်ပါ။ Screen Shots တွေက MIUI9တင်ထားတဲ့ဖုန်းကနေယူထားတာပါ။ MIUI 8 မှာ ပုံစံနည်းနည်းလေးပြောင်းပါတယ်။( MIUI 8 မှာ Settings -> Install Apps ထဲဝင်ရှာဖျက်ပေးရုံပါ )။ ဒါပေမယ့် ပုံကြည့်ပြီး လုပ်ရမယ့် Idea တူတူတွေပါပဲ။ Google လို့ပါတဲ့ app တွေအကုန်သာ ဖျက်ထုတ်ထားလိုက်ပါ။ MIUI9မှာက Settings -> Install Apps ထဲဝင်ရင် app အကုန်မပေါ်ပဲ recently access ရှိတဲ့ app တွေကိုသာပြပေးလို့ အကုန်ပေါ်အောင် အောက်ပါပုံအတိုင်း လုပ်ပေးရတာပါ။
လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ပြီးပြီမို့ Google app ထည့်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါပြီ။ အောက်ပါပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်း ပုံစာလေးတွေပါဖတ်ပြီးသာလုပ်သွားလိုက်ပါ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အားလုံးပြီးရင် Play Store ကို Open မလုပ်ပါနဲ့။ Done ကို နှိပ်ထွက်ပါ။ Google Installer screen မှာလဲ Google Play ဆိုတဲ့ အနီရောင် အဝိုင်းကြီးကို မနှိပ်ပါနဲ့။ Home Key သာ နှိပ်ထွက်လိုက်ပါ။
[ Edited on 17 July 2018 ]
သည်နေရာလေးမှာ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ပါရစေ.. အရင်ကတော့ အထက်ပါအတိုင်း Google Installer နဲ့လုပ်တာပြီးလို့ Reboot လုပ်၊ ပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ MIUI Ver တွေမြင့်လာမှာ security restrict တွေကြောင့် အကုန်အဆင်ပြေသော်လဲ Google Contact လိုမျိုး ကိုယ့် Google Account မှာ မှတ်ထားတာတွေ ပြန်ပေါ်မလာဘူးဆိုတာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအတွက် Google Calendar Sync, Google Contacts Sync, Google Play Services တို့ကို Auto Start Lists ထဲထည့်ထားပါမယ်။ သူတို့သုံးခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ permissions တွေကို အကုန် ခွင့်ပြု (Accept) ပေးထားပါမယ်။
Auto Start list ထဲကိုထည့်ဖို့ Ph Settings -> Permissions ထဲကို ဝင်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ကိုယ်လိုတဲ့ app သုံးခုကိုရှာပြီး ON ထားပေးပါ။
လိုအပ်တဲ့ကိုယ့် app သုံးခုကို Permissions တွေ Accept လုပ်ပေးဖို့ Ph Settings -> Permissions ထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ပါပုံအတိုင်း app တစ်ခုချင်းစီမှာ permissions အကုန် Accept လုပ်ပေးပါ။
Auto Start list ထဲထည့်တာ၊ Permissions တွေပေးတာ ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းပြန်တက်လာချိန် Google Play Store ကိုဖွင့်မယ်။ Google account ( Gmail account ) ကိုထည့်မယ်ဆိုတာတွေကတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်..။ စစချင်း Google account အတွက် User name/ Password ထည့်တာတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ MIUI က Permission တောင်းတဲ့ Box လေးတွေ တက်ချင်တက်လာပါမယ်။ Allow ဆိုတာကိုပဲ နှိပ်ပေးပါ။ Deny ဆိုတာ နှိပ်လိုက်မိတာ၊ ဘာမှမနှိပ်ပဲ သည်တိုင်းထားရင်း box ပျောက်သွားတာ ဖြစ်သွားရင်တော့ နောင် google app တွေ သုံးတဲ့နေရာမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အဆင်မပြေတာမျိုး ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အားလုံးထည့်လို့ ပြိးသွားပြီဆိုရင်တော့ Play Store ထဲကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ App တွေ ဒေါင်းတာ ဘာညာ မလုပ်ပါနဲ့အုံး။ အောက်ပါအတိုင်းလေး ဝင်ကြည့်ပြီး ကိုယ့် Google account ကို manual sync လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သည်တိုင်းလေး အင်တာနက်ဖွင့်ထားပြီး နေနေလိုက်ပါ။ Play Store ထဲ ခဏဝင်နေကြည့်ပါ။ Google service တွေ Update လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် သူ့ဟာသူ Auto လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ Google Play Store ကိုယ်တိုင် Update လုပ်ချင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (အမြဲလဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ စောင့်နေပေးပါ) အချိန်နဲနဲကြာမှ ဖွင့်သုံးချင်သုံးပါတော့။ အဆင်ပြေပါပြီ။ သည် Account Sync ပေးတဲ့ဟာက Play Store သုံးနေရင်း ဖွင့်မရပဲ Retry လုပ်ခိုင်းနေတဲ့ Error မျိုးတွေတွေ့ရင် Home ပြန်ထွက်..။ Recent မှာ clean လုပ်။ ပြီးရင် သည်လို Account Sync တာဝင်လုပ်။ ပြီးမှပြန်သုံး.. စတဲ့ fix လိုအနေနဲ့လဲ မှတ်ထားအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
သည်လောက်ဆိုရင် Google app ကိစ္စတွေ အလွယ်တကူနဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။
Fontေလးႀကိဳက္လို႔ သံုးခ်င္လို႔ bro
Unicode font. Inspect the home page and find the font link.
လုပ္ပီးလို႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ play storeဖြင့္ရင္
Checking infoမွာပဲ ရပ္ေနတယ္
china rom သုံးသူတိုင်း သည်ပုံစံပဲ လုပ်ကြတာပါပဲ.. အဆင်ပြေကြတာပါပဲ.. အဲဒါကို မပြေရင်တော့ ထပ်ကွန့်လုပ်စရာနည်းတော့ မရှိတော့ပါ.. အခြားသော ဘာ app ညာ app တွေနဲ့ လိုက်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့နည်းတွေသာ ရှာဖွေကြည့်ပါ
Google app နဲ ့ဆုိင္တဲ့ app ေတြအကုန္ဖ်က္ျပီးမွ…… Google installer ကို installation လုပ္ပါ….exiting ျဖစ္ေနရင္ ဆက္မတက္ပဲရပ္ေနတတ္ပါတယ္.
Google app နဲ့ဆိုင်တဲ့ app တွေအကုန်ဖျက်ပြီးမှ…… Google installer ကို installation လုပ်ပါ….exiting ဖြစ်နေရင် ဆက်မတက်ပဲရပ်နေတတ်ပါတယ်.